HIM | Health in Myanmar » 2013 » September
Author: HimBur | Category: Myanmar, Q&A2 comments | Tags: AIDS, HIV, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဗိုင်းရပ်အမျိုးအစားက လူတကိုယ်လုံးမှာ နေရာရွေးတယ်။ HIV viruses တွေ ကိုယ်ထဲဝင်လာတာနဲ့ မျိုးပွါးဘို့လုပ်တယ်။ အရေအတွက် များလာချိန်မှာ WBC သွေးဖြူဥတွေကိုလဲ တိုက်ခိုက်တယ်။ သွေးဖြူဥဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စစ်သားတွေ ဖြစ်လို့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေက တိုက်ခိုက်တာခံရပြီး နည်းလာတာနဲ့ ကိုယ့်ခုခံအားတွေ ကျဆင်းလာတယ်။ တော်တော်တန်တန် ရောဂါ ဥပမာ အအေးမိတာ၊ ဝမ်းလျှောတာမျိုးကအစ မခံနိုင်ဖြစ်လာတယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, News2 comments | Tags: CD4, Eleven, HIV, PLH, အခွင့်အရေး
Interesting article about jade but inaccuracies about HIV
Seroprevalence in injecting drug users has never achieved 90% in the country. So it must be less in ‘workers’ who inject drugs. No scientific studies have been performed in this population. Myanmar does NOT have the “world’s largest HIV-infected community”. It is not even close. You can see the data on page 17 of this […]
Irrawaddy presentsadistorted view of male sex work in Chiang Mai
I don’t even know where to begin in criticising this article. It isapity that Nyein Nyein did not contact any of the reputable organisations working with Shan and Burman male sex workers such as Save the Children in Chiang Mai. The study is not available on the Urban Light website so it cannot […]
HIV Determine Strip
Author: HimBur | Category: Myanmar, Q&Ano comments | Tags: HIV, နည်းလမ်း, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလကျော်ကျော်လောက်ကတော့ အပျော်အပါး လိုက်စားမိပါတယ်။ အဖော်တော့ သုံးပါတယ်။ ခုအရေပြား (ခြေသလုံး နှင့် လက်ဖြန်) မှာ ယားနာ လိုလိုပေါက်နေ ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးလဲ နေ့တိုင်း လုပ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော် သွေးစစ်ကြည့်ပါတယ်။ အဖြေမှာတော့ မရှိဘူး (non-reactive) လို့ရေးထားပါတယ်။
ART ဆေးဝါးများ စဉ်ဆက်မပြတ် ရရှိရေးနှင့် ခွဲခြားနှိမ့်ချ ဆက်ဆံမှုများ မရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအား HIV ဝေဒနာရှင်များ တောင်းဆို
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ART, HIV, PLH, အခွင့်အရေး
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာရှင်များအတွက် ART ဆေးဝါးများ စဉ်ဆက်မပြတ် ရရှိနိုင်ရေး၊ ခွဲခြား နှိမ်ချ ဆက်ဆံမှုများ မရှိစေရေးနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုရရှိနိုင်ရန်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ကညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အတွက် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာ ရှင်များက အသိပေး တောင်းဆို သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ART, HIV, PLH
HIV ပိုး ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်သည့် ART ဆေးများ ပိုမိုရရှိလာနိုင်မှုကြောင့် AIDS ရောဂါနှင့် ဆက်နွယ်သည့် သေဆုံးမှုများကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ AIDS ကြောင့် သေဆုံးသူအရေ အတွက်မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ HIV ကူးစက်မှုကို ဟန့်တားနိုင်သည့် ART ဆေးမှာ AIDS ရောဂါကို ကုသနိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း အဆိုပါရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို သိသာစွာ ကျဆင်းစေခဲ့သည်။
HIV ပိုးရှိသူများကို ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုအား တရားဝင်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် တားမြစ်ရန် တောင်းဆိုလိုက်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, မဇ္ဈိမ, အမျိုးသမီး
HIV ဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်သူများကွန်ရက်၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိExcel Tower တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးမှ HIV ကွန်ရက် ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ရာကျော်က အစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ HIV/AIDS ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော အဖွဲ့စည်း များသို့ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ART ဆေးဝါး လိုအပ်ချက်၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပေးရန်လျာထား
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ART, Eleven, HIV, PLH, ဆေးဝါး
ယင်းအေအာတီ စင်တာများတွင် ခြောက်လမှ တစ်နှစ်အထိ အေအာတီဆေးဝါးဖြင့် ကုသမှု ခံယူပြီးသော လူနာများအား မြို့နယ်အဆင့် Decentralized ART sites များသို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး ဆက်လက်ကုသမှု ခံယူစေမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်အတွင်း Decentralized ART sites ၃၀ အထိ ဖွင့်လှစ် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၀၁ ခုအထိ တိုးချဲ့ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
ART ဆေးဝါး မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံး၌ ထက်ဝက် လိုအပ်နေဆဲ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ART, HIV, PLH, ဆေးဝါး
“ကချင်မှာ HIV ရှိသူတိုင်း ၀ယ်သောက်ကျတဲ့ အိုအိုင်လို့ ခေါ်တဲ့ဆေးကို ကျန်းမာရေးဌာနမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ၀ယ်သောက် ရတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကို ၀ယ်သောက်ဖို့ ခက်ခဲတော့ ဦးနှောက် အမြှေးပါး ရောင်ရောဂါ ရရှိကြတယ်။ နားမလည်တာလည်း ပါတာပေါ့။ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်မှာ လူနာ ၈၀ ကျော်မှာ ၇၀ ကျော်လောက်ပဲ ဆေးပေး တယ်။
Reuters gets it wrong
The first sentence of this article is false: “The global rate of HIV infection and the number of AIDS-related deaths have been dramatically reduced, thanks to expanding access to treatment …”. The ‘rate of HIV infection’ can be prevalence or incidence. Treatment increases prevalence. And here is no scientific evidence that the rate of HIV […]
HIV ကူးစက် ခံနေရပြီလား (၂) (အမေးအဖြေ)
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&A1 comment | Tags: HIV, TB, ပညာပေး, လမင်းကို
သွေးစစ်တာကို အန်ဂျီအိုဆေးခန်းတွေ၊ ပြင်ပ ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်းတွေနဲ့ အစိုးရ ဆေးရုံတွေမှာ စစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက သွေး မစစ်ခင်မှာ နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးမှု လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဒီလိုလုပ်တာမျိုးက အန်ဂျီအိုတွေက ဖွင့်ထားတဲ့ ဆေးခန်းတွေ (ဥပမာ- AZG သဇင်ဆေးခန်း၊ PSI ရဲ့ QC ဆေးခန်း… စတာတွေ) မှာ လုပ်ပေး ပါတယ်။ အသေးစိတ် လိပ်စာတွေကို ကျနော်တို့ website (ရန်ကုန်ရှိ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သော၊ သွေးစစ်နိုင်သော လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ – http://www.hivinfo4mm.org/%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD-%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%B8/) မှာ ရယူပါခင်ဗျာ။